Faahfaahinta dagaal caawa ka dhacay magaalada Cadaado | XORRIYA NEWS
Home Wararka Faahfaahinta dagaal caawa ka dhacay magaalada Cadaado
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal khasaare dhaliyay oo caawa ka dhacay afafka hore ee xaruntii hore ee madaxtooyada magaalada Cadaado.
Iska hor imaad kooban ayaa dhexmaray sida wararku sheegayaan ciidanka Nabad Sugidda iyo Ciidan Maleeshiyo beeled ah oo hubeysan, kuwaasi oo weerar kusoo qaaday Ciidanka Nabad Sugidda Soomaaliya ee ku sugan Cadaado, waxaana jira warar kala duwan oo kasoo baxaya khasdaaraha ka dhashay iska hor-imaadkaasi kooban.
Wararku waxaa ay sheegayan in laba qof ay ku dhaawacmeen oo mid kamid ahi uu yahay shacab, halka ruuxa kale ee dhaawacmay uu ka tirsanaa dhinacyada dagaaalmay, waxaana wararku intaas ku darayaan in laga yaabo in khasaaruhu uu intaa ka badan yahay.
Wali mas’uuliyiinta Nabad Sugiddu kama hadlin iska hor imaadka, sidoo kale ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka Cadaado oo ku aaddan dagaalka kooban ee la sheegay in uu dhexmaray Ciidanka Nabad Sugidda iyo Maleeshiyaadka hubeysan.
Wararkii u dambeeyay ayaa ku warramaya in hadda magaaladu ay daggan tahay aysana jirin wax dagaal ah oo ka socda, waxaana dadka degaanka ay soo sheegayaan in xaaladdu ay sidii hore kusoo laabatay oo aysan jirin wax dagaal ah.
Ma cadda waxa sababay in Ciidanka u abaabulan hab beeleedka ay weeraraan Ciidanka Nabad Sugidda, waxaana ilaa iyo hadda aan lahayn saababta rasmiga ah ee ka dambeysay in iska hor imaadkaasi uu dhaco.